Hadday Caano Qubtaan, Hanbadaa La Qaban Jiray: Waa HiilQaran « HiilDan.Com
Home › Warka (News) › Hadday Caano Qubtaan, Hanbadaa La Qaban Jiray: Waa HiilQaran
Hadday Caano Qubtaan, Hanbadaa La Qaban Jiray: Waa HiilQaran By hiildan on May 14, 2012	• ( 31 )
Share this:ShareFacebookTwitterGoogle +1PrintEmailLinkedInLike this:Like Loading...« TACSI: MARXUUM, DR. CABDISHAKUUR SHEEKH CALI JAWHARDila Waa Somaliland, Nin Diida Iyo Nin Doonaba.! »Categories: Warka (News)	Related Articles
hiildan	May 15, 2012 • 08:22	Reply ↓	Ali-Durgiye	May 15, 2012 • 09:07	Hiildan & Haboon,
Carsaanyooyin cusub oo saxadda fara ku dirirka ku soo biiray uun iga dheh, waxay doonayaan in ay samatar iyo Saylici oo laba tareen oo is waydaaran kala saaran ay ticket qudha ku wada raacaan eesh calaa caqli dhaga cas kkkkkkkkkkkk.
Reply ↓	hiildan	May 15, 2012 • 09:18	kkkkkkkkkkkk, anagu ma nihin carsaayno, labadan nina madaxnimo soomaaliyeed ayay u taaganyihiin.
Mutacalimiinta ka dhashay Maxadcase waxay ka fikiraan meel fog iyo midnimo guud. Mutacalimiinta reer an ogahayna waxay ku meeraystaan madax dhaqmeed iyo muramaha sokeeye. kkkkkkkkkkk
Reply ↓	Darbi Samaroon	May 15, 2012 • 09:45	Ninkan markuu yimaado dhulkiisa ayuu wax noqon doonaa wuuna is daalinayaa inta uu walaweynta isku macaanaynaayo maxaa u diiday inuu dhulkiisa soo booqdo iyo dadkiisa….? adeer ha isku wareerina kolay cidha dhaw ayaa la qarxin doonaa oo isagoo meel ka duryamaaya ayaa qarax ay hoos dhigi doonaan Hawiye dhiigyacab baraga arday qalin jabisay Huteel Shaamow ku qarxiyay ayaa biyo u kaban kan dhakada weyn ee Samaroonka iska weyniisiiya ee ku farxa la fadhiga Mjeerteen iyo Daarood ayuu mabsuudaa markuu la fadhiyo Samaroonkana wuu cararaa adeer tan baa kuu hantiya hadaad dhulkaaga iman weydo oo Somaliland iyo Awdal hogaamin weydo ha sugin inaad koonfur wax ka noqotid qarax.com waakan ee soo noqo Samataroow.
Hadii uu soo noqon waayo ina Samatar tan baa u hantiya dhawaan dhako mayd buu leeyahay.
Reply ↓	hiildan	May 15, 2012 • 09:55	Sxb Darbi waa geesinimo inuu ninku ku dhinto mabda’iisa, hadii uu halkaas ku dhintana taariikhdaa xusi doonta
Samatar wuxu furay chapter cusub oo an horey loo furin. Wuxu la yimiday kartida uu ku keeni karo xusbi siyaasadeed, hogaankana u qaban karo, iyo kalasoonida uu Ummad soomaaliyeed isu soo hor taagi karo. Maanta intaas ayaa ku filan Dr Samatar xitaa haddii uu madaxweyne Soomaliyeed noqon kari waayo. Taasi waa taariikh lagu xusuusan doono.
Docda kale, waxa ilma samatar u fiican in samaron yidhaahdo anaga ma aha. Dr Cumar Cusmaan Raabe ayaa beri hore sheegay in geesiga ka dhasha Soomaali ay qabiilkiisu dumiyaan. Wuxu yidhi, qabiilkiisa ayaa durbaanka ka daba tunta oo yidhaahda, kaasi waa anaga, kaasi waa anaga, anaguu naga dhashay. Kadibna qabiilooyinkii kale ayaa iyaguna durbaanka kala hor yimada oo yidhaahda, kaasi anaga ma aha, kaasi anaga nagama dhalan. Sidaasi ayuuna geesiga Soomaaliyeed ku gaagaxaa.
Hadaba Axamad Samatar waxaba u fiican inaad tidhaahdiin kaasi anaga ma aha, kaasi waxba nooma qaban, kaasi nagama tirsana. Waxa laga yaabaa in Soomaali garato geesinimadiisa oo ay yidhaahdaan, kaasi waa anaga waa geesi soomaaliyeed, waan soo dhaweynaynaa..
Reply ↓	Fariid	May 15, 2012 • 11:08	Dhowr mar ayuu badalay mowjada.
hada waxa aad moodaa in uu xaga waqooyiga la haysto
khudbadiisu waxa ay u egtahay mid la hadlaya dad ku nool
wadan hore u maray.
Reply ↓	Haboon	May 15, 2012 • 11:45	Ali Durkiyeh,
Waxaa jira ticket aad maalin dhan ku wareegi karto, waagu marku baryo ilaa gabalku ka dhacayo kuna raaci karto inta trein eed rabto ama metro, bus etc… Aqoonyahankayaga madaxnimada loo boqraayo, guul iyo barawaaqaan ilaah uuga baryeeynaaye, adiguna hadaanad nagu soo biirayn bal ducaduun hana nagala bakhayline amiiin u dheh…
Reply ↓	Haboon	May 15, 2012 • 13:41	Reply ↓	Mustafa Asxaabi.	May 15, 2012 • 17:52	Xisbiga Soomaliyeed ee Hiil Qaran waa soo dhawaynanaa waxaanan leenahay allow ka dhig kii umada soomaliyed u horseedi lahaa bashbash iyo barwaaqo Amiin. Guuuuuuuuuuuuuuuuul iyo Gobonimo.
Reply ↓	Marunbaa	May 16, 2012 • 01:05	Cimrigaagoo dheeraadaa geel dhalayana wuu ku tusaa bay ahayd maah maahdii reer xamar. Bilee odaygan gudcur socodka ahi somali hogaanka u qabay. Hadii somali inta caqliga leh een cudurka nuxurka ahi ku jirin fikirto tala deedana raacaan, somali Samatar nin ka daacadsan kana somalisan heli mayso. Waxa intaa u dheer aqli iyo garasho somali ku kooban baa ka buuxa. Hadii la doorto waxa somali ka bixi doonta, xigto miis, qaraboobo kiil, hebel nacayb iyo anaa kaa gobsan. Samatar ninkii reer iyo qaraabo ku raacoow, masalhaad baytul qudus u jeedise xaga mako iyo madiino u baydh. Samatar kuwii la dhashay gaajo dubatay toban dolar na aanu u qudhin markaa miyaanu nin wax loo dhiiban karo ahayn? Anuu marlay sidaan hore u sheegay nin toobin laf ku hayuun baan u arkaaye waa suurta gal in meel kale ka soo baxo fikir kayga iyo wixii la midahina marlay waa iska mala awaal uun.
Reply ↓	Ali-Durgiye	May 16, 2012 • 08:19	Hiildan&Haboon,
meel ay timihiinu u xiirmaan yeesha hadaad gedabuursi aragtaan waxaad leedihiin Awbarre u guura awdal martiba ku tihiinee,
hadaad Issaq la qureecadaan waxaad ku andacoodaan laylan waa nahaaran in ay SMN tuug ahayd godobna dadka samaroon ka gashay oo la xisaabin doonu,
magacaga reer Ciise madoobe wuxuu taarrikhda nigu qoran yahay in ay yihiin cirfiidyo meel ba,s ka soo caraabay,
qofkii geeska aad ku aragtaanba hadaad sidii curi laf xaday aad jaajuur iskaga kicisaan idinku busna buuxin karayn sow arrintu noqon mayso Mahad casow kala figigix !!!!!!!!!!!!!!!!
Reply ↓	godan	May 16, 2012 • 09:50	Waad la heshay walaahi,idinkoon busna buuxin karayn kkkkk ,iyo halkay isla joogaan maalintii darayde Borama laysugu yimi ayaanad joogin horaa loo yidhi nimaan talin jirin haduu taliyo nimaan tagi jirin ayaa taga waa xin kambadhuudha waanse u quus goynay tusnayna ninka hogaanka reerka leh.
Reply ↓	Haboon	May 16, 2012 • 10:28	idinku waxaad tihiin oromad iyo ciise gurgure nagu soo gaxay, waar horta yaa somali asal ah ma iswaydiiseen ?
Reply ↓	Haboon	May 16, 2012 • 10:33	Alaah ha daaye, tolkay waa u qalmaan hogaanka somaliya somaliland jabuuti iyo meel kasta,
Ina Samatar waa somali masha alaaah
Reply ↓	Haboon	May 16, 2012 • 10:36	Inta xaasid ka ah qiyaamaaha la indin waydiin, Hanolaadan Saylici iyo ilma Samatar,
Reply ↓	Haboon	May 16, 2012 • 10:49	duceysane wiilkayoow
damane yaan lagugu xaman
dadkaad xukuntona tixgali
dalkana daacad u ahoow….
Vivaa HiilQran……Aloow u Hiili HiilQaran…amiin
Reply ↓	godan	May 16, 2012 • 10:56	Waan u hiiliyay huuno Hiilqaran Samatarna waa nin daran Marunba ayaa dhameeyay intaan odhan lahaa.
Reply ↓	Haboon	May 16, 2012 • 11:03	Bal is yara qanjiidhiya inaad damqataan iyo in kale, badheedho cad baan ku sheegay
bulshadu ha ogaato saaka
Vivaa Qaraabo Hiilku
Reply ↓	Haboon	May 16, 2012 • 11:30	ali durkiye iyo godan
hinaasa idin haya mar heesaha somalida indiku ma fahmaysaan, gurgure iyo oromada waxaan idin dalbay hees odaygii guraageed maxamuud axmed, Reply ↓	Hoori	May 16, 2012 • 13:08	Vivva hiilqaran dhamantiin reer Awdal state gaar ahaan reer gabiley abtiyaalo Dhamantiin
Reply ↓	godan	May 16, 2012 • 23:00	Mahadsanid Habon heesta aad ban ula dhacay………………
Reply ↓	cibaado	May 17, 2012 • 06:24	inader hiildan aad iyo aad ban kag mahcelinyaa sida fican eed fikirkaag uu dhiibthay
Reply ↓	Haboon	May 17, 2012 • 10:49	Reply ↓	Haboon	May 17, 2012 • 11:19	Dadkoo Nabadu Gaadhiyo
Dawadiisu Waa HiilQaran…
Reply ↓	Dilaawi.	May 18, 2012 • 08:34	Dr Axmed Ismaciil,Ilaahay ha daayo.
Waa Geesi Somaliyeed.Ilaahay ha u fududeeyo hogaaminta Somaliyeed.
Somali oo dhan ayaa u hayn Axmed.
Maxamed Casoow ka hadha Axmed.
Axmed Ismaciil,waa Nin ka sareeya Reernimo,Qabiilnimo,Tolnimo iyo waxa Somali halkaa dhigay.
Hiilqaran:Somalinimo iyoi Islaamnimo weeyi mabda’a u degsan.
Reply ↓	Haboon	May 18, 2012 • 08:58	Reply ↓	Haboon	May 18, 2012 • 12:17	Parole de : Les Imbéciles:
d’entrer dans l’histoire à reculons
écoutent la “synfolie” des canons
enfuis à tombeau ouvert
Nous sommes victimes de l’endettement à croissance
Exponentielle et baignons dans l’économie sous perfusion
C’est la mondialisation de l’économie à sens unique
Reply ↓	Haboon	May 19, 2012 • 09:38	Dictature :
Que dans l’unité
Mènera à l’adversité
Je refuse l’exil
Car Dieu est ma gloire
La paix sociale, la paix civile
Ne peut se réaliser que dans l’unité
Dans l’unité dans l’unité
Diviser pour mieux nous escroquer
Ce n’est pas en cassant le thermomètre
Qu’on fera baisser la fièvre
Reply ↓	HaniMuufo	May 19, 2012 • 12:17	Habooneey,
Vous avez vraiment revolusioner vraiment où je suis vraiment étonné de vos pensées et je suis totalement d’accord avec vous.
Reply ↓	Haboon	May 20, 2012 • 10:21	Hani waad mahadsantahay, huuno..
Reply ↓	Haboon	May 20, 2012 • 10:44	Paroles de : Armée Française Armée Française,
Nous ne voulons plus d’indépendance sous votre surveillance,
Nous sommes des Etats indépendants et souverains,
Et votre présence militaire entame nôtre souveraineté,
Bafoue nos dignités,
Et ça, ça ne peut plus durer,
En côte d’ivoire nous ne voulons plus de vous,
Au Sénégal nous ne voulons plus de vous,
Au Gabon nous ne voulons plus de vous,
En centre Afrique nous ne voulons plus de vous,
A Djibouti nous ne voulons plus de vous,
A Djamena nous ne voulons plus de vous,
Nos armées nationales nous suffisent,
Vos conseillés militaires nous suffisent,
Les enfants des tirailleurs vous disent allez voir ailleurs,
Les enfants des immigrés vous disent de vous en- aller,
Faaqidaada Arrimaha Bulshada: Caydu Waa Cad Doqoniimo	guuleed on Beesha Habar Xuseen(B/Celi) Oo…guuleed on Beesha Habar Xuseen(B/Celi) Oo…guuleed on Beesha Habar Xuseen(B/Celi) Oo…Aradka cubdule on Mr. Siilaanyo Thank You and Co…guuleed on Mr. Siilaanyo Thank You and Co…guuleed on Mr. Siilaanyo Thank You and Co…Aradka cubdule on Mr. Siilaanyo Thank You and Co…Aisha on Mr. Siilaanyo Thank You and Co…jabuutaawi on Mr. Siilaanyo Thank You and Co…guuleed on Mr. Siilaanyo Thank You and Co…guuleed on Mr. Siilaanyo Thank You and Co…mustafe on Mr. Siilaanyo Thank You and Co…mustafe on Mr. Siilaanyo Thank You and Co…mustafe on Mr. Siilaanyo Thank You and Co…guuleed on Mr. Siilaanyo Thank You and Co…	Dr Cumar Cusmaan Raabe (AUN)Geesiga Dhulkiisa, Guusha U Horseeda, Geerida Dishaay, Geedkaa Ha Go'
Blog Stats	1,207,773 Booqasho - (Mahadsanid Mar Kale Nasoo Bariidi.!)